Ukusetyenziswa kwe-gvSIG njengeMthombo ovulekileyo
IiGeofumadas zigutyungelwe buqu iintsuku ezintathu zeNkomfa yeHlabathi ye-15 ye-gvSIG eValencia. Ngosuku lwesibini, iiseshoni zahlulwe zangamabhloko ama-4 anjengomhla odlulileyo, ukuqala nge-GvSIG Desktop, nantsi yonke into enxulumene neendaba kunye nokudityaniswa kwenkqubo kwaboniswa. Izithethi zebhloko yokuqala, ...
Phantse yonke into ilungele i-7th gvSIG Latin America kunye neNkomfa yeCaribbean, eya kubanjelwa eMexico. Sifumana ukuxabiseka kokongezwa ngokuthe ngcembe kwamaziko oluntu, athe kunyaka alawulwa sisoftware yobunini, inkqubo kwiimeko ezininzi eziqale ekuphunyezweni kweeprojekthi zenkxaso-mali zamanye amazwe ezi ...
Inkululeko kunye nolawulo - phantse yonke into ilungele iNkomfa ye-9 gvSIG
Ingqungquthela ye-XNUMX ye-gvSIG yamanye amazwe ibhengeziwe, eza kwenzeka kwiveki ephelileyo ka-Novemba eValencia. Ukusukela kusuku lwesibini, isilogeni sasisoloko sisetyenziswa esibonisa ukugxila kunxibelelwano lwenkampani yosuku. Ukwenza ukubuyela umva kancinci, ezi ibizizihloko zenkomfa ...
NgoNovemba, iziganeko ezibalulekileyo ze-3 kwi-geospatial field
Ngenyanga yeziganeko ezithathu ubuncinci ziya kwenzeka eziya kuthi ngokuqinisekileyo zithathe into kwi-ajenda yam ... nakwiholide yam. 1. I-SPAR Yurophu Iyakuba se-Holland, e-Hague malunga nemihla efanayo naleyo yoKukhuthazwa Lo msitho udibanisa abavelisi kwezobuchwephesha be-3D, ngakumbi ukusuka eYurophu apho ikhoyo…
Ukulandela umkhondo weenkqubo ezikhuthazwe sisiseko se-gvSIG, sonwabile ukwazisa ngophuhliso lwezifundo oluya kuphuhliswa kusetyenziswa i-gvSIG esetyenziswa kwiinkqubo zoLawulo loMhlaba. Ikhosi inoxanduva lweCREDIA, inyathelo elinomdla elenziwe ngaphakathi kwesicwangciso sokuzinza seProjekthi yeNdawo yeNdalo ...